စတော့ရှယ်ယာရှိနမူနာများအတွက်ပို့ဆောင်ချိန်မှာ ၇ ရက်ဖြစ်သည်။ အမိန့်ကိုအားဖြင့်တင်ပို့လိမ့်မည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖော်ပြ ဝန်ဆောင်မှု အဆိုပါစက်ယန္တရားမှလွဲ။ ။ သင့်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ပေးပို့သည့်အချိန်သည်အကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မည်။
ထုတ်ကုန်အများစုကိုကုန်ပစ္စည်းများသို့ရောင်းချနိုင်ပြီးငွေပေးချေပြီးနောက် ၇-၁၅ ရက်အတွင်းပို့ပေးသည်။ တင်ပို့ခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့မည့်လိပ်စာကိုအတည်ပြုပါ။
အမှာစာများကိုစနေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှာစာအမြောက်အများကိုတွေ့ကြုံခံစားနေပါကတင်ပို့ရောင်းချမှုများကိုရက်အနည်းငယ်နှောင့်နှေးနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ပို့ဆောင်ရန်အပိုဆောင်းရက်ပိုခွင့်ပြုပါ။ သင်၏အမှာစာကိုကြာမြင့်စွာထားရှိပါကကျွန်ုပ်တို့မှအီးမေးလ်သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းမှတဆင့်ဆက်သွယ်ပါမည်။
3. အဆိုပါ OEM & ODM အမိန့်တွင်
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် OEM & ODM ဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံနိုင်သည်။ အထူးစိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များ (သို့) အထူးအမှာစာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်ဆက်သွယ်ပြီးနောက်ဆုံးတွင် PI ၏ပေးပို့သည့်နေ့စွဲကိုလိုက်နာပါမည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမည်။
ပို့ဆောင်ခများကို ဆုံးဖြတ်ပြီး ငွေရှင်းသည့်အချိန်တွင် သင့်အား အကြောင်းကြားပါမည်။ ကွဲပြားသော ပို့ဆောင်မှုနည်းလမ်းများဖြင့် သင့်မှာယူမှုများအရ ကျသင့်ငွေနှင့် ပေးပို့ချိန်သည် ကွဲပြားပါမည်။
5. တင်ပို့မှုအတည်ပြုချက် & အမိန့်ခြေရာခံ
သင်၏အမှာစာများပေးပို့ပြီးသည်နှင့်အတည်ပြုစာကိုအီးမေးလ်ပို့ပါမည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံး၊ ခြေရာခံခြင်းအိုင်ဒီနှင့်လင့်ခ်ပါ ၀ င်ပါလိမ့်မည်။ အကူအညီနဲ့, သင်အမိန့်ကိုခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်သည်သင်၏အမိန့်ကိုခြေရာခံရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။